Iingcali zePR: Awuxolelwanga kwi-CAN-SPAM | Martech Zone
Iingcali zePR: Awuxolelwanga kwi-CAN-SPAM
NgoLwesibini, Aprili 20, 2010 NgoLwesibini, Meyi 10, 2016 Douglas Karr
Isenzo se-CAN-SPAM siphume ukusukela ngo-2003, kodwa iingcali kwezoluntu qhubeka nokuthumela ii-imeyile ngobuninzi yonke imihla ukukhuthaza abathengi babo. Isenzo se-CAN-SPAM sicacile, siquka "Nawuphi na umyalezo weposi we-elektroniki eyona njongo iphambili kukwazisa okanye ukuthengisa imveliso okanye inkonzo."
Iingcali ze-PR ezihambisa ukukhutshwa kweendaba kwiibhlog ngokuqinisekileyo ziyafaneleka. Inkqubo ye- Izikhokelo ze-FTC zicacile kubathengisi be-imeyile:
Xelela abamkeli ukuba baphume njani ekufumaneni i-imeyile yexesha elizayo evela kuwe. Umyalezo wakho kufuneka ubandakanye inkcazo ecacileyo necacileyo yendlela umamkeli anokukhetha ngayo ukufumana i-imeyile kuwe kwixa elizayo. Buza isaziso ngendlela ekulula ngayo ukuba umntu aqhele ukuyibona, ayifunde kwaye ayiqonde.
Suku ngalunye ndifumana ii-imeyile ezivela kubaqeqeshi bezonxibelelwano noluntu kwaye bona ze unayo nayiphi na indlela yokuphuma. Ke… ndizakuqala ukubabamba ukuba baphendule ngokugcwalisa i Isikhalazo se-FTC nge-imeyile nganye endiyifumanayo engenayo indlela yokuphuma. Ndingacebisa ukuba ezinye iibhlog zenze njalo. Kufuneka sibabambe aba baqeqeshi baphendule.
Ingcebiso yam kubasebenzi bePR: Fumana umnikezeli ngenkonzo ye-imeyile kwaye ulawule uluhlu lwakho kunye nemiyalezo ngqo apho. Andikhathali ngokufumana ii-imeyile ezifanelekileyo, kodwa ndingathanda ithuba lokuphuma kwezi zingabalulekanga.
tags: ugaxekile-spamukufaka i-imeyileimeyile yeposiiipakipriiplagiEyobudlelwane boluntuispemu
IOfisi yakho, idilesi yakho, uphawu lwakho
Epreli 21, 2010 ngo-8: 27 AM
Kukho umbuzo owahlukileyo apha, othi, "kutheni abo bantu be-PR bengaqulunqi iipaki ezilungiselelwe?"
Njengomntu we-PR ngokwam (ndingazange ndize kuwe, nangona kunjalo), ndiyayiphazamisa ingcamango yokuqhuma kwe-imeyile. Olona qheliselo lulungileyo luyaqhubeka kukwazi abaphulaphuli bakho kunye nokwenza iiplani ezinomtsalane kubo, endaweni yokutshiza nokuthandaza.
Iposti yakho ikhokelela kumbuzo wokulandela- nangona- ngaba kufuneka sibeke u "Nceda undazise ukuba awungekhe undive" -umgca wokugqibela ekupheleni kwe-imeyile nganye ebhekiswe kuye?
Epreli 21, 2010 ngo-11: 35 AM
Molo Dave! Ubuncinci, kufanele ukuba kubekho umgca apho. Nokuba i-imeyile ibhekiswe ngokukodwa ayithethi ukuba ayisiyo-SPAM. Akukho 'lincinci' uluhlu lobungakanani be-imeyile esekwe kurhwebo. 🙂
Logama nje ingeyoyabucala kwaye iyazisa ngokwendalo, ndiyakholelwa ukuba iingcali ze-PR kufuneka zithobele.
Epreli 21, 2010 ngo-2: 02 PM
Ndicinga ukuba unendawo enkulu. Ungacinga ukuba ngaxa lithile iingcali ze-PR ziya kufunda ukuba kufuneka zithengise abathengi bazo ngokusekwe kubudlelwane obomeleleyo endaweni yokutyhala imithombo yeendaba… Kufuneka okungenani bazi ukuba awufanele uyicaphukise ibhlog enabaphulaphuli 😉
Epreli 24, 2010 ngo-9: 15 AM
Ngaba ikhona irekhodi yokuba zingaphi izaphulelo zeSpam ezinyanzelisiweyo ukuza kuthi ga ngoku ziintlawulo eziqokelelweyo?
Epreli 27, 2010 ngo-2: 01 PM
Ukuthobela i-CAN-SPAM kufuneka ibe yindawo elula yokufumana ngaphezulu, kodwa kukho iindlela ezithile ezizodwa zenkqubo yesiqhelo ye-PR ukuba unyanzelisa ukuthotyelwa kwenyani. Ukongeza ikhonkco lokungabhalisi kunye nedilesi yakho yokuhlala kufuneka ikufumane uninzi lwendlela eya apho ufuna ukuba khona kwaye wonke umntu osebenza kwi-PR kufuneka enze le nto. Nangona kunjalo, ngobuchwephesha phantsi kwe-CAN-SPAM, nje ukuba umntu angabhalisi awusoze uphinde ubathumele i-imeyile, ngaphandle kokuba bangene kwakhona. Unokuthatha abaxhasi abahlukeneyo njenge "mithetho eyahlukeneyo yeshishini" phantsi komthetho njengoko intatheli inokubulala ibali kumthengi omnye , kodwa jonga ukukhululwa kwakho kwenye inkunkuma. Kwakhona, njengearhente (esebenza njengomshicileli) yomthengisi, kuya kufuneka wabelane ngokuphuma kwakho kunye nomthengisi (umthengi wakho) ukuze bangathumeli kule dilesi ye-imeyile nokuba banengxaki kwakhona kwinkqubo ye-PR. Unokuphikisa ukuba awuyithengisi imveliso ekubhekiswa kuyo kwintatheli njengomthengi wokugqibela, ke ngokomthetho uthumela i-imeyile yolwazi okanye yentengiselwano. Kwaye ukuba umntu upapasha ulwazi loqhakamshelwano ngenjongo yokufumana ukukhutshwa kweendaba, kukho imvume ebekiweyo. Iipowusta apha zichanekile ukuba konke malunga nokujolisa kwaye uninzi lwazo zonke zinxulumene nentatheli. Ugaxekile usesweni lombonisi. Olunye uluvo olumnandi lwe-CAN-SPAM losuku!
Epreli 27, 2010 ngo-2: 10 PM
Todd- Ndiyazi ukuba bekukho ngaphezulu kwe-100 yokutshutshiswa kwe-Can-Spam. I-FTC inokumangalela kunye ne-State AG's, kunye nee-ISP ezinje nge-AOL zinokumangalela phantsi kwe-Can-Spam. Ke iinkampani ezinje ngeMicrosoft ziphumelele kumonakalo omkhulu kulwaphulo-mthetho kwaye ndibone i-FTC isuka naphi na isuka kwi-55,000 yeedola ukuya kuthi ga kwi-10 yezigidi zeedola. UFacebook ufumene awona mabhaso makhulu eza malunga ne- $ 80 yezigidi. I-flipside kukuba amabhaso amaninzi awaze aqokelelwe. Kwakhona uphando oluninzi luphela kwiindawo zokuhlala ngaphandle kokukhutshwa kweendaba, ke inani elinyanzelekileyo lezenzo zokunyanzeliswa linokubonakala ngathi alinakubalwa. Ngokwenyani ndiza kubuza iofisi yabo yolwazi malunga noluntu kwaye ndibone ukuba ndinokumba ntoni. Masinwabe!